Oops! Mr.Superstar Hit on Me – Gold Channel Movies
1Season 1 Jun. 20, 2022
Episode 1 Jun. 20, 2022
Episode2Jun. 21, 2022
Kanda [Cake's mom
Nadol [Ton's nephew
Tan [Ton's sister
Devil Sister, Astrophilie, My Coach တိုလိုမျိုး မောင်လေးနဲ့မမကားတွေချည်းပဲ GC က ဓာတ်ကျနေတယ်ထင်မှာစိုးလို ဆန့်ကျင်ဘက် taste လေးရအောင် နာမည်ကြီး Lakorn မင်းသား Pong Nawat နဲ့ Angel beside me ကားထဲက Jane Ramida တိုပါဝင်ထားတဲ့ ဦးနဲ့ခေးကားလေး Oops! Mr.Superstar Hit on Me ကို GCverse လေးတွေအတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အလုပ်သင်လေး Cake အတွက်ကတော့ Special Effect အဖွဲမှာ မိတ်ကပ်ဆရာမအလုပ်ကို မျှော်လင့်နေခဲ့တာကြာပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ ဒီအလုပ်ကိုရရချင်းမှာပဲ ပြဿနာတစ်ခုကို မီးခွက်တောင်မထွန်းလိုက်ရဘဲ ရှာလိုက်မိပါတယ်။ တခြားမဟုတ်ပါဘူး။ သူ့အမေ အကြိုက်ရဆုံး Idol ၊ အာရှရဲ့အသည်းကျော်မင်းသား Ton Naruebet နဲ့ တစ်ညတာမှောက်မှားမိတာပါပဲ။ ‌မှောက်မှားတာက အကြောင်းမဟုတ်ပေမဲ့ နှစ်ကြောင်းပေါ်တဲ့အခြေအနေပါရောက်လာတဲ့အခါ အာရှအသည်းကျော်ကြီး Ton တစ်ယောက် သူ့ရဲ့ image မပျက်ရလေအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
တစ်ဖက်မှာလည်း အမေ့ Idol လည်းဖြစ်၊ အဖေအရွယ်လောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ Ton နဲ့ဆက်ဆံရေးကို Cake တစ်ယောက် ချပြနိုင်ပါ့မလား?
Cake မေမေကရော သူကြိုက်တဲ့မင်းသားကို သားမက်တော်ရမယ့်အရေးကို သဘောတူပါ့မလား?
သတင်းထောက်တွေ၊ ပါပါရာဇီတွေ၊ ပရိသတ်တွေရဲ့ဖိအားတွေကြားမှာ ဦးလေးကြီး Ton နဲ့ Cake တိုလက်တွဲနိုင်ပါ့မလား? စတာတွေကိုတော့。。。တနင်္လာ အင်္ဂါညတွေမှာ တင်ဆက်ပေးသွားမယ့် ဒီဇာတ်ကားလေးမှာ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးဖို ပြောချင်ပါတယ်နော်။
Subtitlers : Egg, Lycoris, Phi, Taki
Original title ซุป'ตาร์กับหญ้าอ่อน
First air date Jun. 20, 2022
Last air date Jun. 20, 2022